Zayar : Phone Ringtone ကို ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်လိုသူများအတွက်....Phone Ringtone ကို ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်လိုသူများအတွက် အကောင်းဆုံးနေရာလေးတစ်ခုလေးတစ်ခုကတော့... www.cellsea.com ဆိုတဲ့ ဆိုက်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်... Website မှာ ဖုန်းအတွက် လိုအပ်တဲ့ သီချင်းလေးတွေကို စိတ်ကြိုက် Ringtone ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပိုမိုပြည့်စုံတာကတော့ ကိုယ်တိုင်မပြုလုပ်ချင်သူတွေအတွက်လည်း အသင့်ပြုလုပ်ပြီးသား Ringtone လေးတွေကို ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Ringtone အဖြစ် ပြောင်းချင်တဲ့သီချင်းကို ကွန်ပျူတာထဲမှာ ထည့်သွင်းထားလို့ဖြစ်စေ၊ ၀က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာ တင်ထားတယ်ဆိုရင်လည်း လင့်ကိုသေချာ Upload ပြုလုပ်ပြီး တင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Ringtone မပြုလုပ်တတ်တဲ့သူတွေအတွက် အဆင်ပြေပြေနဲ့ အလွယ်တကူ ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် စမ်းသပ်ကြည့်ဖို့တော့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေနော်.....
Phone Ringtone ကို ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်လိုသူများအတွက်....Phone Ringtone ကို ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်လိုသူများအတွက် အကောင်းဆုံးနေရာလေးတစ်ခုလေးတစ်ခုကတော့... www.cellsea.com ဆိုတဲ့ ဆိုက်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်... Website မှာ ဖုန်းအတွက် လိုအပ်တဲ့ သီချင်းလေးတွေကို စိတ်ကြိုက် Ringtone ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပိုမိုပြည့်စုံတာကတော့ ကိုယ်တိုင်မပြုလုပ်ချင်သူတွေအတွက်လည်း အသင့်ပြုလုပ်ပြီးသား Ringtone လေးတွေကို ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Ringtone အဖြစ် ပြောင်းချင်တဲ့သီချင်းကို ကွန်ပျူတာထဲမှာ ထည့်သွင်းထားလို့ဖြစ်စေ၊ ၀က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာ တင်ထားတယ်ဆိုရင်လည်း လင့်ကိုသေချာ Upload ပြုလုပ်ပြီး တင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Ringtone မပြုလုပ်တတ်တဲ့သူတွေအတွက် အဆင်ပြေပြေနဲ့ အလွယ်တကူ ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် စမ်းသပ်ကြည့်ဖို့တော့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေနော်.....
Phone Ringtone ကို ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်လိုသူများအတွက် အကောင်းဆုံးနေရာလေးတစ်ခုလေးတစ်ခုကတော့... www.cellsea.com ဆိုတဲ့ ဆိုက်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်... Website မှာ ဖုန်းအတွက် လိုအပ်တဲ့ သီချင်းလေးတွေကို စိတ်ကြိုက် Ringtone ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပိုမိုပြည့်စုံတာကတော့
ကိုယ်တိုင်မပြုလုပ်ချင်သူတွေအတွက်လည်း အသင့်ပြုလုပ်ပြီးသား Ringtone လေးတွေကို ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Ringtone အဖြစ် ပြောင်းချင်တဲ့သီချင်းကို ကွန်ပျူတာထဲမှာ ထည့်သွင်းထားလို့ဖြစ်စေ၊ ၀က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာ တင်ထားတယ်ဆိုရင်လည်း လင့်ကိုသေချာ Upload ပြုလုပ်ပြီး တင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Ringtone မပြုလုပ်တတ်တဲ့သူတွေအတွက် အဆင်ပြေပြေနဲ့ အလွယ်တကူ ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် စမ်းသပ်ကြည့်ဖို့တော့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေနော်.....
Posted by zayar htut at Monday, December 10, 2012
MP3 To Ringtone Gold 8.7 Full
Mobile Phone နဲ့ မြန်မာဖောင့်
Phone Ringtone ကို ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်လိုသူများအတွက်...
ှSmart Phone ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့သူတွေအတွက်...
Ringtone များရယူရန် နေရာသစ်လေးတစ်ခု......
Model နိမ့်Android ဖုန်းပိုင်ရှင်များအတွက် GameBoo...
♣GSM Internet Setting တည့်နည်း(for Android)♣
ANDROID ဖုန်းများအတွက် ဆော့ဝဲလ် နှင့် ဂိမ်းလေးများ...
Guitar တီး..၀ါသနာပါသူများအတွက်.. Game ကောင်းလေးတစ်...
Facebook Password တွေရိုက်ထည့်လိုက်ရင်တွေ့မှာပါ......
[url=http://winkkk.com/pimp_glitter_3571.html][img]http://winkkk.com/photo/3571.gif[/img][/url] [ur. Watermark theme. Powered by Blogger.